JungleScout: အမေဇုံတွင်ရောင်းအားစတင်ရန်နှင့်ကြီးထွားရန်ကိရိယာများနှင့်သင်တန်းများ Martech Zone
Amazon ၏လက်လီရောင်းဝယ်မှုနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့မတွက်ပါ။ ကူးစက်ရောဂါနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းငယ်များစွာအားပိတ်ဆို့ရန်နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်လက်လီလုပ်ငန်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောပျက်စီးမှုများအကြောင်းမပြောရန်။
ယနေ့တွင်သုံးစွဲသူများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် Amazon ၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ကြသည်။ Amazon ၏စျေးကွက်ရောင်းသူများထံမှဝင်ငွေသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်တိုးတက်ခဲ့သည်။
ငါ unabashedly တစ်ခုပါ အမေဇုံချုပ် စျေးဝယ်သူနှင့်ငါ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဘာမှအကြောင်းကိုရတဲ့၏အဆင်ပြေပျော်မွေ့။ ကျွန်ုပ်မှာ Amazon Key တောင်မှကားမောင်းသူသည်ကျွန်ုပ်၏ကားဂိုဒေါင်ထဲတွင်အထုပ်များကိုလုံခြုံစွာထားခဲ့သည့်နေရာတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စျေးဝယ်ခြင်းကိုတစ်ခါမျှမွေ့လျော်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်အိမ်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ယနေ့ခေတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ရောင်းနေလျှင် Amazon ကိုရောင်းချခြင်းသည်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တန်း၏အားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ကပ်လျက်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များသည်စျေး နည်း၍ သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရောင်းဝယ်မှုများရှိနိုင်သည်။ ပြီးတော့သင်ဟာ Amazon ကိုရွှေ့ဆိုင်းခြင်းအားဖြင့်စျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ။
သင်လုပ်လျှင်ရိုးသားစွာအပြစ်စီရင်ခံရပြီးသင်မလုပ်လျှင်သူကပြောသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် ၀ ယ်ယူသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အချို့သောစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများကိုပြုလုပ်ရမည်။ သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုအမေဇုန်တွင်သိသိသာသာကြီးထွားလာပြီးသင်၏စီးပွားရေးကိုအလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်သည်ကိုသံသယမရှိပါ။
မည်သည့်ကြီးမားသောစျေးကွက်နှင့်မဆိုကဲ့သို့ပင်သင်၏အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုမှာသင်၏ကုန်ပစ္စည်းအားအကောင်းဆုံးနှင့်ကြော်ငြာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Amazon ကြော်ငြာတွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုပျက်ပြားသွားသည်။ သစ်ပင်ကြီး သင်၏ရောင်းခရီးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်တည်ဆောက်ထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းကအမေဇုံရောင်းသူတွေကို
တည်ဆောက်ပါ အမြတ်အစွန်း အမေဇုံအပေါ်ရောင်းချခြင်း။
အားလုံးအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ထောက်ခံမှု မင်းလမ်းတစ်လျှောက်လိုတယ်
သစ်ပင်ကြီး ရောင်းချသူများအတွက်ရောင်းချသူများကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်သီးသန့်သင်ခန်းစာများ၊ တစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန်များ၊ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများ၊ အပတ်စဉ်လေ့ကျင့်ခြင်း၊
နှင့် သစ်ပင်ကြီး'' s ကို အခွင့်အလမ်းရှာဖွေသူAmazon မှအမြတ်အစွန်းအများဆုံးထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်အတွက် ၀ ယ်လိုအားကျ။ ပြိုင်ဆိုင်မှုနည်းသောသော့ချက်စာလုံးများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သူတို့၏ပလက်ဖောင်းသည်သင်ထုတ်ကုန်မဟာဗျူဟာကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် AI မောင်းနှင်သည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို အသုံးပြု၍ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုစစ်ထုတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သစ်ပင်ကြီး'' s ကို ကုန်ပစ္စည်း Tracker သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းအတွေးအခေါ်များကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့်စောင့်ကြည့်ရန်ကူညီသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အုပ်စုတစ်စုကိုအချိန်နှင့်နေရာအတိအကျပြောင်းလဲခြင်း၊ မမျှော်လင့်သောဆူးများနှင့်ရာသီအလိုက် ကျော်လွန်၍ အကဲဖြတ်ရန်။
သင်အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ် ထုတ်ကုန်အလားအလာ ကုန်ပစ္စည်းအခွင့်အလမ်းတစ်ခုစီအတွက်စျေးနှုန်း၊ ၀ င်ငွေနှင့် FBA အခကြေးငွေများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်ကူညီရန်အမြတ်အစွန်းဂဏန်းတွက်စက်နှင့်အပြည့်စုံဆုံးထုတ်ကုန်သုတေသန filter များဖြင့်သင်၏ရှာဖွေမှုကိုကျဉ်းမြောင်းစေပါသည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ရရှိရန်အခွင့်အလမ်းကိုဘယ်တော့မှမလွတ်ပါ။ တောတွင်းကင်းထောက် Automation ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့အချိန်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အင်္ဂါရပ်သည်ရောင်းသူဗဟိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်တောင်းဆိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုလုံးလုံးလျားလျားအလိုအလျောက်ဖြစ်စေသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောအမှာစာတိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုရရှိရန်၊ တောင်းဆိုမှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်သင်မည်မျှသိမ်းဆည်းထားသောနာရီကိုပင်ကြည့်ရှုရန်သေချာပါစေ။
ယခင်က Amazon ကြော်ငြာ Amazon Marketing Services (AMS) ဟုလူသိများသည်မှာ Amazon ၏ကြော်ငြာဖြေရှင်းမှုများကိုဖော်ပြရန်ထီးထီးအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်သည်။
On-Amazon ကြော်ငြာ - ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှု Amazon PPC (pay-per-click ကြော်ငြာများ)
အမေဇုံတွင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်း - အမေဇုံစီမံခန့်ခွဲမှု DSP (CPM, သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်, ကြော်ငြာကိုတစ်ထောင်နှုန်းကုန်ကျ
အကြီးအသေးရောင်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့် Amazon ၏ကမ်းလှမ်းသောအမျိုးမျိုးသောကြော်ငြာကိရိယာများကိုအပြည့်အ ၀ နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ အပြည့်အဝပူဇော်သက္ကာကိုထံမှရောင်းချသူများအဘို့ဤအံ့သြဖွယ်ကြော်ငြာလမ်းညွှန်ထဲမှာဒီမှာစာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည် သစ်ပင်ကြီး.
Amazon သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းရန်နည်းလမ်းများပေးသော်လည်းသင်ထုတ်ကုန်၊ ထုပ်ပိုးမှုအတွေ့အကြုံနှင့်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုအာရုံစိုက်နိုင်စေရန် Amazon ၏ပြည့်စုံမှုအစီအစဉ် FBA မှသင်အားသာချက်ယူနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် FBA သည်သင် Amazon သို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်ပြီးကျန်အရာများကိုဂရုစိုက်သောကြောင့်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမေဇုံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အတိုးတက်ဆုံးသောပြည့်စုံသောကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ FBA သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအမေဇုံပြည့်စုံမှုစင်တာများတွင်သိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုပေးသည်၊ ထို့နောက်အမေဇုံထုပ်၊ သင်္ဘောများနှင့်သင်၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
FB ကို set upA - သင့်ဖန်တီးပါ Amazon ကအကောင့်ရောင်းand Seller Central သို့ ၀ င်ပါ FBA ကို set up.
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကိုဖန်တီးပါ - သင်ပြီးတာနဲ့ သင့်ထုတ်ကုန်များကိုထည့်ပါ အမေဇုံ catalog သို့ FBA စာရင်းသတ်မှတ်.
သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုပြင်ဆင်ပါ - ကုန်ပစ္စည်းများကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုစင်တာသို့ပြင်ဆင်ပါ အမေဇုံထုပ်ပိုးလမ်းညွှန်ချက်များ နှင့် ရေကြောင်းနှင့်လမ်းကြောင်းလိုအပ်ချက်များကို.
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကို Amazon သို့ပို့ပါ - သင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပါ၊ အမေဇုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ID တံဆိပ်များကိုပုံနှိပ်ပါ၊ သင်၏တင်ပို့ရောင်းချမှုများကို Amazon ပြည့်စုံမှုစင်တာများသို့ပို့ပါ။ ပိုမိုလေ့လာပါ အမေဇုံမှစာရင်းပေးပို့ခြင်း.
Tags: Amazonamazon fbaAmazon ထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်Amazon ထုတ်ကုန်ခြေရာခံခြင်းAmazon အရောင်းသင်တန်းကျောက်တံတားထုတ်ကုန်သုတေသန tools များAmazon အပေါ်ရောင်း
ရည်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက် - သင်၏အရောင်းအဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစီမံရန်၊ လှုံ့ဆော်ရန်နှင့်အမြင့်ဆုံးရန် Gamification